Aragtida Islamka | Radio Himilo
Home / Aragtida Islamka
Wax ka ogow dalalka haweenka garaaca raggooda!
Mahad Mohamed January 16, 2019
Himilo FM – Xarunta baaritaanada danbiyada hay’adda QM ayaa shaacisay in haweenka Masar noqdeen kuwa ugu horreeya ee garaaca raggooda caalamka oo dhan. Dr Ashjan Nabil oo ku taqasusay arrimaha qoyska ayaa tilmaamay in dadaalo badan oo lagu taageeri jiray ...
Dhageyso: Barnaamijka Aragtida Islaamka
radio himilo July 29, 2016
Aragtida Islaamka waxaynu ku eegnaa oo ku soo qaadannaa arrimaha la xiriira Islaamka, si fahanka bulshada muslimka ahi ee Soomaaliyeed sare loogu qaado. Toddobaadkan waxaan ku eegi doonnaa sameynta acmaasha wanaagsan iyo astaamaha lagu garto aqbaliddeeda. Waxaa marti noogu ah ...
radio himilo July 9, 2016
Aragtida Islaamka waxaynu ku eegnaa oo ku soo qaadannaa arrimaha la xiriira Islaamka, si fahanka bulshada muslimka ahi ee Soomaaliyeed sare loogu qaado. Toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa Faa’idada ku jirta joogteynta acmaasha wanaagsan. Waxaa marti noogu ah Sheikh Axmed ...
radio himilo June 3, 2016
Aragtida Islaamka waxaynu ku eegnaa oo ku soo qaadannaa arrimaha la xiriira Islaamka, si fahanka bulshada muslimka ahi ee Soomaaliyeed sare loogu qaado. Toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa Xuska Alle iyo Ahmiyadda uu u leeyahay qof kasta oo Muslim ah. Waxaa ...
radio himilo May 27, 2016
Aragtida Islaamka waxaynu ku eegnaa oo ku soo qaadannaa arrimaha la xiriira Islaamka, si fahanka bulshada muslimka ahi ee Soomaaliyeed sare loogu qaado. Toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa Illaalinta Carabka. Waxaa marti noogu ah Sheikh Axmed Sh.Xasan Sh.Quddubi, waxaana soo ...
radio himilo May 13, 2016
Aragtida Islaamka waxaynu ku eegnaa oo ku soo qaadannaa arrimaha la xiriira Islaamka, si fahanka bulshada muslimka ahi ee Soomaaliyeed sare loogu qaado. Toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa Xijaabka haweenka Muslimaadka ah. Waxaa marti noogu ah Sheikh Yuusuf Tuurxume Jimcaale, ...
radio himilo May 6, 2016
Barnaamijka Aragtida Islaamka waa toddobaadle aad ka dhageysataan Idaacadda Himilo. Aragtida Islaamka waxaynu ku eegnaa oo ku soo qaadannaa arrimaha la xiriira Islaamka, si fahanka bulshada muslimka ahi ee Soomaaliyeed sare loogu qaado. Toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa ahmiyadda Tarbiyada ...
radio himilo April 29, 2016
Barnaamijka Aragtida Islaamka waa toddobaadle aad ka dhageysataan Idaacadda Himilo. Aragtida Islaamka waxaynu ku eegnaa oo ku soo qaadannaa arrimaha la xiriira Islaamka, si fahanka bulshada muslimka ahi ee Soomaaliyeed sare loogu qaado. Toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa ahmiyadda Aqlaaqda ...